Antivirus Echiche ndị dị oke
01 nke 08
McAfee. Foto © McAfee
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ị na-ejikọta kwa ụbọchị site na PC gị, Mac, laptọọpụ, smartphone, na / ma ọ bụ mbadamba. N'agbanyeghị ihe m na-eme, otu ihe na-anọgide na-adịgide adịgide - Enwere m ntanetị oge niile (na-ejikarị ọtụtụ ngwaọrụ). Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya McAfee mere ka o doo anya na pasent 60 nke ndị na-ere ihe n'ụwa niile nwere ngwaọrụ atọ ma ọ bụ karịa . E-azụmahịa ụwa nọgidere na-abawanye dị ka a na-atụ anya ka a na-ere ahịa ihe ruru nde $ 1.25 n'afọ a. Site n'afọ 2016, nde mmadụ 550 ga-eji ọrụ ntinye ego na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nde 185 na 2011. Ka ọ dịgodị, paswọọdụ-izu ohi Trojans toro pasent 72 na ọnụọgụgụ nke igwe malware dị okpukpu 44 karịa 2012 karịa ọnụ ọgụgụ dị na 2011. Ụdị a na- buru ibu na ihe ize ndụ gị nwere ịbịaru egwu egwu n'ịntanetị.
McAfee na Intel aghọpụtawo ihe nchebe zuru ezu nke a na-akpọ McAfee LiveSafe. McAfee LiveSafe na-enye gị udo nke uche site n'ichebe gị niile ngwaọrụ, data, na njirimara gị mgbe ịnọ na njikọ. Ọ na-ewepụta ngwọta zuru oke maka nchebe mgbe ị na-enye usoro ntanetị nke Web-friendly na-enyere gị aka ilekọta nchebe na ngwaọrụ gị niile. McAfee LiveSafe na-agụnye igbe ndị a:
Ngwa Windows Interface 8
Nchekwa Ngwaọrụ Unlimited
02 nke 08
McAfee LiveSafe Windows 8. Photo © Jessica Kremer
Na Windows 8 , McAfee LiveSafe na-enye gị ohere ịlele ọnọdụ nchedo gị yana ngwa nchedo dị iche iche gị. Site na ngwa a, ị nwere ike ịnweta usoro nchịkwa paswọọdụ gị na mkpuchi nke onwe gị, ma ọ bụ vidio ojii. Ịnwekwara ike idozi nchekwa nchebe maka ngwaọrụ gị niile.
03 nke 08
McAfee LiveSafe Unlimited Nchekwa Ngwaọrụ
Ngwaọrụ niile. Foto © McAfee
N'adịghị ka ọtụtụ nchedo nchedo, McAfee LiveSafe na-enye gị ikikere na- akparaghị ókè . Ya mere, ị nwere ike idozi nchedo niile PC gị, laptọọpụ, Mac, mbadamba, na smartphones. Ntube nchebe omenala site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na - enye gị ohere itinye ngwa ha naanị 1 ma ọ bụ 3 PC. Ọzọkwa, ngwọta ndị a anaghị enye nkwado maka ngwaọrụ mkpanaka. Na McAfee LiveSafe, ihe niile i nwere bụ kpuchie. Ụfọdụ n'ime nchebe gụnyere:
Antivirus , anti-spyware , na anti-phishing
Firewall abụọ ụzọ
Nchekwa ebe nchekwa weebụ
Chọta, mkpọchi, ehichapụ
Data ndabere / weghachite
Kpọọ na SMS nyo (gam akporo)
Web na ngwa nchedo (gam akporo)
04 nke 08
McAfee SafeKey. Foto © Jessica Kremer
Mgbe ị na-eche nche, otu n'ime nnukwu nsogbu ị nwere ike ịnweta bụ icheta aha njirimara gị na okwuntughe gị na akaụntụ ịntanetị. McAfee SafeKey na- edozi nsogbu a. Nke a modul na-ejikwa okwuntughe gị na aha njirimara gị, na-echekwa ozi gị dị ka ozi akụ na ụma, ma na-akwado PC, Mac, iOS, Android, na Kindle Fire . Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị nbanye na akaụntụ email gị, ị gaghị etinye aha njirimara na paswọọdụ gị ka McAfee SafeKey ga-ewepụta nke a maka gị. Ihe kacha mma banyere McAfee SafeKey bụ na ọ ga-echeta nzere gị n'agbanyeghị ngwaọrụ na ihe nchọgharị weebụ ị na-eji.
05 nke 08
McAfee Personal Locker. Foto © Jessica Kremer
Na McAfee Personal Locker , ị nwere ike ịchekwa nchekwa nke ihe ederede gị nke ọma na iji nkwenye biometric. Iji nweta faịlụ gị, ihuenyo nke ihu, olu, nọmba njirimara nke onwe (PIN), na Ihe Ntube Nchekwa Ama na Paswọdu Ogologo (IPT / OTP) chọrọ. Ị nwere ike iji aka 1GB nchekwa ezoro ezo, nke nwere ike ịnweta site na Windows 8, iOS, na Android.
06 nke 08
McAfee Anti na-ezu ohi
McAfee Ịgba anwụrụ. Foto © Jessica Kremer
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị furu efu ma ọ bụ zuo ohi, njirimara na -egbochi mgbochi McAfee na - enye gị ohere igbachi ma gbanyụọ ya. Site n'iji ngwaọrụ ọzọ, ịnwere ike ịchọta ngwaọrụ gị ma weghachite data gị. Akụkụ a na-emechi emechi na-enye ntinye nzuzo ma nwee njirimara ihe ntinye aka. A na-enyere ndị ọrụ nkwụsị aka na Intel Core i3 na n'elu.
07 nke 08
McAfee LiveSafe Akaụntụ M
McAfee Akaụntụ M. Foto © Jessica Kremer
Akaụntụ m na- enye ọnọdụ dị mkpa iji hụ anya nchebe niile maka ngwaọrụ niile. Nke a na-enyere gị aka ijikwa nchebe site na otu ebe ma nye gị ohere ịlele otú e si echebe ngwaọrụ na ihe nhọrọ nchekwa ndị ọzọ nwere ike ịdị mkpa.
08 nke 08
McAfee LiveSafe ọnụahịa na nnweta
McAfee LiveSafe Pricing. Foto © Forbes
Malite na July 2013, McAfee LiveSafe ga-adị site na ndị na-ere ahịa ahọpụtara. McAfee LiveSafe ga-abanye na ngwa Ultrabook na Dell PC malite na June 9, 2013. Nkọwa ọnụahịa gụnyere:
$ 19.99 maka ndenye ọnwa 12 mgbe a zụrụ ya na PC ọhụrụ ma ọ bụ mbadamba ($ 79.99 mgbe afọ mbụ gasịrị)
$ 79.99 maka ntinye ọnwa 12 maka PC ndị dị na mbadamba
McAfee Nkwado Ndị Ahịa bụ n'efu
N'iji akụkụ ya bara uru, McAfee LiveSafe bụ otu n'ime nchedo nchedo kachasị atụ anya nke afọ 2013. Ọ dị mma ka a hụ ya, ma o doro anya na ihe osise McAfee na Intel ọhụrụ bụ ihe dị egwu ma na-ekwe nkwa.
Ihe atụ nke Malware kachasị emebi
Kedu ihe bụ Sirefef Malware?
Otu esi ezere Scams nlekota ngwugwu
Esi wepu FBI Moneypack Virus
Mụta Nzube nke Nje Virus Nlekọta na Otu esi ewepu ya
Kedu ihe bụ Blackhole RAT?
Gịnị bụ a Keylogger Trojan?
Tinye na Jikwaa Foto Facebook
Ihe kacha mma PS4 Split-Screen Games na Buy na 2018
Atụmatụ maka ịchọta Portraits kacha mma
Esi zoo ozi emelitere na Akaụntụ IMAP
IPhone 5C: Atụmatụ, Ụdị nkọwa, na ihe ọ bụla ọzọ Ị Kwesịrị Ịma
Kedu ihe bụ Mpịakọta Mpịakọta Mpịakọta?
Skapu SVS SB-1000 - Foto na Atụmatụ
Gini ka INB4 bu?
8 Windows Linux kachasị mma na usoro ndị ọzọ na-arụ ọrụ Clones
5 RSS Aggregator Ngwaọrụ Ị Pụrụ Jiri Jikọta Ọtụtụ Ntanetị RSS
OPPO Digital's BDT-101ci Na-elekwasị anya na Ndị Nhazi Ndị Nhazi
Otu esi achọta akwukwo ndi ozo n'uwa
Otu esi eji Ntube Nchekwa Mac gị
Otu esi eme iwu nke Email na Mail
Ị Pụrụ Wụnye ngwa ngwa na TV Apple?
Audio Hi-Res Audio: Isi ihe
Ntuzi 11 kachasị mma na-edezi Software iji zụta na 2018
Esi Ntọlite ​​iPod Shuffle
Kedu otu ngwa Mac gị ji eji ngwa ngwa iji chekwaa Energy
5 Stereos kachasị mma ịzụta na 2018 maka obere oghere
Google Earth na Civil 3D